‘कम्युनिस्टकाे छाडा शासनमाथि कांग्रेसले अंकुश लगाउँछ’ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
‘कम्युनिस्टकाे छाडा शासनमाथि कांग्रेसले अंकुश लगाउँछ’
प्रकाशित मिति १५ असार २०७५, शुक्रबार २०:५५ लेखक नेपाली जनता
याक्खा समुदायमा ‘बलि’ राजाको हुकुम
संखुवासभा । ‘सत्ययुगको कुरो, एक समय बलि राजा सिकिस्त बिरामी परेछन् रे ! उपचारका अनेक विधिगर्दा पनि राजालाई ठीक…
मठमन्दिरको दानदक्षिणा तथा भेटीमा अनियमितता बन्द, मन्दिरको भेटीमा लेखापरीक्षण गरिने !
काठमाडौं । पुरातात्विक सम्पदाका रुपमा रहेका मठमन्दिरको दानदक्षिणा तथा भेटीमा अनियमितता हुन…
अनमोल र निता उत्कृष्ट
काठमाडौं । ‘डि सिने अवार्ड’ को दशौं संस्करण बिहिबार सम्पन्न भएको छ । अवार्ड कार्यक्रममा उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड ‘कृ’को…
मेकअपबिनै सुन्दर देखिन सकिन्छ ?
काठमाडौँ। नियमित रुपमा सफा पानीले अनुहार धुने गर्नुपर्छ । दिनमा कम्तिमा ३ देखि चार पटक फेशवासले अनुहार धुने गरेमा…
काठमाडाैं । नेपाली विमानलाई आफ्नो भूमिमा उड्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी कालोसूचीमा राखेको युरोपियन युनियन इयुले त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिएको…